မြှင့်တင်ထားသော ကြမ်းပြင်များ၊ သံမဏိ ဘိလပ်မြေပြား၊ Calcium Sulphate Panel - Upin
UPIN သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အထပ်မြင့်ကြမ်းပြင်များ၊ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ဘုတ်များနှင့် အဆောက် အအုံများ ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အမြင့်မားဆုံး ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စတုရန်းမိုင် ၃ သန်းခန့် အခင်းအကျင်းများကို ထုတ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း 50 ကျော်သို့ နှစ်စဉ် တင်ပို့ပါသည်။
ကြိုတင်ရောင်းသည်ဖြစ်စေ အရောင်းပြီးသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ခိုင်မာသော နည်းပညာအဖွဲ့တစ်ခု၊ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အတွေ့အကြုံ၊ ကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းအဆင့်၊ အရည်အသွေးမြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဉာဏ်ရည်တုကိရိယာကို ဖန်တီးပါသည်။
အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများ- - ပြားအရွယ်အစား 600x600x35 မီတာ သို့မဟုတ် 610x610x35 မီလီမီတာ သို့မဟုတ် 500x500x27 မီလီမီတာ - ဂဟေဆော်ထားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသံမဏိတပ်ဆင်ခြင်း - ထိပ်တန်းအချောထည်၊ လျှပ်ကူးနိုင်သော PVC၊ ဗီနိုင်း၊ အထပ်သားကြွေပြား၊ ပေါင်းစပ်သစ်သားပြား၊ ကြွေထည်ဘိလပ်မြေ စသည်တို့အတွက်၊ coated epoxy finish -Stability：အပူနှင့်စိုထိုင်းဆများပြောင်းလဲသောအခါ စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများ မပြောင်းလဲဘဲ တည်ငြိမ်နေပါသည်။- အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို စက်ရုံမှထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် သံချေးတက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးရမည်...
အသုံးပြုခွင့် ကြမ်းခင်းပြားအမျိုးမျိုးအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် (1) 60 စင်တီမီတာ သို့မဟုတ် 24 လက်မ စတုရန်းပုံ။(2) Q195 သံမဏိပစ္စည်း၊ အကွက်တစ်ခုလျှင် 22 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်နှင့် epoxy coating ပြီးမြောက်ခြင်း။(၃) ဖွင့်နှုန်း ၆၈%။(၄) လေစီးဆင်းမှုဇယားကို ရရှိနိုင်သည်။CISCA စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းအားဖြင့်၊ 2500lb focus load နှင့် 2000lb 10 သည် rolling load ကိုဖြတ်သန်းသည်။
အဓိက စွမ်းဆောင်ရည် လက္ခဏာများ- -Panel အမျိုးအစား A55၊ အရွယ်အစား 600x600x55m၊ ဘောင်အလေးချိန်- 12kgs/pc - ထိပ်တန်းအချောထည် ဖိအားမြင့် laminate၊ conductive PVC၊ ဗီနိုင်း၊ သုံးထပ်သား ကြွေပြား၊ ပေါင်းစပ်သစ်သားပြား၊ ကြွေပြား၊ terrazzo စသည်တို့။ - သေသပ်ကျစ်ကျစ်သော အလူမီနီယမ်ပြား -Powder coated finish Applications- UPIN ၏ မြှင့်တင်ထားသော ကြမ်းပြင်စနစ်ဖြင့် ခရိုင်ဒေတာစင်တာ သို့မဟုတ် အထွေထွေရုံးပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပါ။သန့်ရှင်းသောအခန်းများ၊ ဒေတာစင်တာ၊ လေဆိပ်၊ ဘဏ်၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ စက်ရုံများနှင့် စသည်တို့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ Panel type conc.loa...
UPIN ၏ အဆောက်အအုံများတွင် လျှပ်စစ်သွပ်ပြား သို့မဟုတ် အပူနှစ်ပြီး သွပ်ရည်ပြုလုပ်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် အနိမ့်ပိုင်း၊ စံနှုန်း၊ လေးလံမှု၊ အပိုဆောင်း လေးလံမှု ဆန့်ကျင်ရေး အဆောက်အဦများ အပါအဝင် ဒီဇိုင်းရွေးချယ်စရာ အများအပြားကို ကျွန်ုပ်တို့ စက်ရုံတွင် ရနိုင်ပါသည်။စက်ရုံ UPIN ကုန်ပစ္စည်းကုဒ် Flat head pedestal ဖော်ပြချက် အဆိုပါ အောက်ခံခုံအား အအေးခံထားသော စတီးပြားခေါင်းအသားလွှာဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး စတုတ်နှင့် အောက်ခံပြားလွှာကို ပြွန်ဖြင့် ဂဟေဆော်ထားသည်။ဦးခေါင်း gasket NA ဦးခေါင်းခေါင်းပြား 76mmx76mmx3mm၊ အအေးခံစတီးလ်အမျိုးအစား၊...
UPIN ၏ အဆောက်အအုံများတွင် လျှပ်စစ်သွပ်ပြား သို့မဟုတ် အပူနှစ်ပြီး သွပ်ရည်ပြုလုပ်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် အနိမ့်ပိုင်း၊ စံနှုန်း၊ လေးလံမှု၊ အပိုဆောင်း လေးလံမှု ဆန့်ကျင်ရေး အဆောက်အဦများ အပါအဝင် ဒီဇိုင်းရွေးချယ်စရာ အများအပြားကို ကျွန်ုပ်တို့ စက်ရုံတွင် ရနိုင်ပါသည်။စက်ရုံ UPIN ထုတ်ကုန် ကုဒ် လေးသိန်းခွဲ ဖော်ပြချက် C ချန်နယ် အအေးခန်း သွပ်ရည်စိမ်ရည် တစ်သိန်းခွဲ 21mmx30mmx575mm နှင့် 1.0mmT။ကုန်ပစ္စည်း Code Screw ဖော်ပြချက် Round head 11mm dia.. Threaded part 6mm dia.x43mmL, electro zinc coating ဖြင့် စတီးဝက်အူ။...
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား 24 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပါမည်။
Single-Post Pneumatic Lifting Desk Zt565
ပစ္စည်း- စားပွဲထိပ်ကို အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် Density Fiberboard ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ထူးခြားချက်- 1. ချိန်ညှိနိုင်သော အမြင့်- 785-1095mm;2. မျက်နှာပြင်သည် ချောမွေ့ပြီး လက်ရာမြောက်သော 3. အစိုဓာတ်ခံ၊ ပုံပျက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော 4. ခြစ်ရာကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး သန့်ရှင်းရန် လွယ်ကူ 5. ဝမ်းနုတ်ဆေးဖြင့် အလွယ်တကူ ရွေ့လျားနိုင်သည်။ဖော်ပြချက်- သိပ်သည်းဆ- ≥680kg/m3 Dimension- L770*W380*H785-1095mm အရောင်- ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း အဆင့် 1: ပုံတွင်ပြထားသည့်မြှား၏ဦးတည်ချက်အတိုင်း ဝက်အူ(အောက်ခြေဘောင်)ကို ပြင်ပါ အဆင့် 2: ဝက်အူကို ပြင်ပါ။ ) ကြောက်စရာကြီး...
• အအေးမိသောစတီးလ်ဖွဲ့စည်းပုံ • လောင်ကျွမ်းနိုင်သောပစ္စည်းမဟုတ် • 42% ပွင့်လင်းဧရိယာ • အပေါ်ယံပိုင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည် • အပေါ်ယံချိန်ညှိနိုင်သော damper ရရှိနိုင် • ခရီးဆောင်သယ်ယူနိုင်သောကိရိယာဖြင့် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော • စွမ်းဆောင်ရည်ဆွဲချခြင်း- အောက်ဖော်ပြပါဇယားကိုကြည့်ပါ • Airflow data- အောက်တွင်ဇယားကိုကြည့်ပါ • ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးအတွက် Fitting ကြမ်းပြင်ပြားများ • 600 မီလီမီတာ သို့မဟုတ် 24 လက်မစတုရန်း • ပြားအလေးချိန်- 11 ကီလိုဂရမ်/ပီစီ ဗလာ • အကန့်အမြင့် 38 မီလီမီတာ • အကျယ်အဝန်း လိုအပ်ချက်- 21 မီလီမီတာ အကျယ် 60 စင်တီမီတာနှင့် 24 လက်မ စနစ်အတွက် သင်မည်ကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကို လက်ခံပါသနည်း...
• Die Cast အလူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းပုံ • လောင်ကျွမ်းနိုင်သောပစ္စည်းမဟုတ် • 56% ပွင့်လင်းဧရိယာ • အပေါ်ယံဖြင့်ရရှိနိုင်သည် • အပေါ်ယံချိန်ညှိနိုင်သော damper ရရှိနိုင် • ခရီးဆောင်သယ်ယူနိုင်သောကိရိယာဖြင့် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော • Load Performance-Load အောက်ကဇယားကိုကြည့်ပါ • Airflow data- အောက်တွင်ဇယားကိုကြည့်ပါ • Fitting အမျိုးမျိုးအတွက် ကြမ်းပြင်ပြားများကို အသုံးပြုနိုင်ရန် • 600 မီလီမီတာ သို့မဟုတ် 24 လက်မစတုရန်း • ဘောင်အလေးချိန်- 11 ကီလိုဂရမ်/ပီစီ ဗလာ • ဘောင်အမြင့် 41 မီလီမီတာ • လေးသိန်းခွဲအကျယ် လိုအပ်ချက်- 60 စင်တီမီတာ နှင့် 24 လက်မ စနစ်နှစ်ခုစလုံးအတွက် 21 မီလီမီတာ အကျယ် ∆Ps Static pressure box (Pa) ...
Static ဖိအားလေကြောင်း0တားဗွန်းဟီဘို 2.5 1311 8.552125 52.5 211.5 212.5 2111 2112.5 211.5 ။ 21.9 10.9 211.5 211.5 ။ 21.5 2111 21.5 ။ 21.5 212.5 ။ 211.5 .111 7112.5 ။ 21.5 211.5 211.5 211.5 .11111 211.5 2112.5 ။ 21.5 ။ 21.5 .1111 21.5 21121 21.5 21121 21.5 212.5 211212.5 22.5 2217 22.5 25 2117 .12011 22.5 3893 22.5 3893 21.6 25.6 25.6 25 ။ဟုတ်ကဲ့၊ ဆက်လုပ်နေတဲ့ အနည်းဆုံး အမှာစာအရေအတွက်ရှိဖို့ နိုင်ငံတကာ မှာယူမှုအားလုံးကို လိုအပ်တယ်။ဒါပေမယ့် အရေအတွက်နည်းနည်းနဲ့ ပြန်ရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ What is our website ကိုကြည့်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်...
600x600mm Air Grille Spec
• သံမဏိပြားများ၊ သစ်အူတိုင် သို့မဟုတ် ကယ်လ်စီယမ်ဆာလဖိတ်ပြားများအတွက် သင့်လျော်သည်။• 600mmx600mm သို့မဟုတ် 24"x24"။• အကန့်အလေးချိန်- 10kg/pc • ပန်နယ်အမြင့်- 50mm damper • လေးသိန်းခွဲအကျယ် လိုအပ်ချက်- အကန့်များအတွက် တူညီသော stringer ကို အသုံးပြုပါ။• အလူမီနီယံ extruded ဖွဲ့စည်းပုံ • 68% ပွင့်လင်းဧရိယာ • အပေါ်ယံပိုင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည် • အောက်ခြေ ချိန်ညှိနိုင်သော damper ရရှိနိုင်သည် • သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ကိရိယာဖြင့် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော Static loads Rolling loads Impact loads Panel Understructure Concentrated loads ...
Upin ၏ အဝိုင်း/စတုရန်းကြိုး grommets များသည် လျှပ်စစ်ပါဝါလမ်းပြများ၊ တယ်လီကွန်းကြိုးများ၊ ဒေတာကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ဖုန်စုပ်ပိုက်များအတွက် ဘေးကင်းသော၊ သပ်ရပ်ပြီး ထိရောက်သော ထွက်ပေါက်ကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ကြမ်းပြင်အကန့်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။Grommet သည် အလွန်အကြမ်းခံသော ABS ပလပ်စတစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် လေးလံစွာအသုံးပြုရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။Grommet သည် စမတ်ကျပြီး ရိုးရှင်းသော ဒီဇိုင်းကို ထည့်သွင်းထားပြီး ကြိုးများကို ကာကွယ်ရန် ပလပ်စတစ်ကိုယ်ထည်သည် ဘောင်မှတဆင့် ဖြန့်သည်။
အဝိုင်းစုတ်တံ 75mm dia
ကုန်ပစ္စည်းအမည်- Round Grommet Application- လေ၀င်လေထွက်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အအေးပေးစနစ်၏ ထိရောက်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် အသစ်နှင့် ရှိပြီးသား ကြမ်းပြင်ဖြတ်တောက်ထားသော အပေါက်များကို ပိတ်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။အရောင်- • UPIN ၏အဝိုင်း grommet သည် အနက်ရောင်အရောင်အရွယ်အစားဖြင့် တာရှည်ခံ polypropylene မှ ပုံသွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်- အတိုင်းအတာနှင့် ကြွေပြားဖြတ်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ အရွယ်အစား (W x D x H) စုစုပေါင်းအရွယ်အစား အချင်း x အမြင့် 82 x 20 mm ထုတ်ကုန်အမြင့်4mm မြှင့်ထားသောကြမ်းပြင်အထက် အမြင့်ဆုံးဖြတ်တောက်မှုအရွယ်အစား အလုံပိတ် 76 မီလီမီတာ အသုံးပြုနိုင်သော ကေဘယ်ကြိုး ဧရိယာ 5671 စတုရန်းမီလီမီတာ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု...
Cable Grommet သည် ကြမ်းပြင်အမျိုးအစားအားလုံးတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး တပ်ဆင်ရမြန်ဆန်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။အနက်ရောင်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး အရွယ်အစား 140x140 မီလီမီတာရှိ ခိုင်ခံ့သော ပလတ်စတစ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။Grommet သည် အလွန်အကြမ်းခံသော ABS ပလပ်စတစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် လေးလံစွာအသုံးပြုရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။Grommet သည် စမတ်ကျပြီး ရိုးရှင်းသော ဒီဇိုင်းကို ထည့်သွင်းထားပြီး ကြိုးများကို ကာကွယ်ရန် ပလပ်စတစ်ကိုယ်ထည်သည် ဘောင်မှတဆင့် ဖြန့်သည်။
Esd ကြမ်းပြင်များအတွက် နေ့စဉ်သတိထားပါ။
Anti-static ကြမ်းပြင်သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အား တည်ငြိမ်ပျက်စီးမှုကို ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အသက်တာအတွက် အဆင်ပြေစေပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ anti-static floor ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုကြာရှည်စေရန်အတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုတွင်အသေးစိတ်အချက်အချို့ကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်...
စက်ပစ္စည်းများတွင် esd အထပ်မြင့်ကြမ်းခင်းများ၏ အားသာချက်များ...
ကြီးမားသော၊ အလတ်စားနှင့် အသေးစားကွန်ပြူတာအခန်းများအတွက် အခန်းတွင်းရှိ စက်ကိရိယာများပေါ်တွင် ငြိမ်လျှပ်စစ်မီး၏ဆိုးကျိုးများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် esd အခင်းအကျင်းများကို တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။အောက်ဖော်ပြပါ အားသာချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် 1၊ တပ်ဆင်မှုကို ရိုးရှင်းစေပြီး ပိုမိုကြီးမားသော f...
PVC ဆန့်ကျင်ဘက်ကြမ်းခင်းကို PVC သစ်စေးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသင့်ပြီး ထူးခြားသော extrusion molding လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။PVC အရာဝတ္ထုများသည် စာမျက်နှာများကြားတွင် တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ကို ထုတ်ပေးပြီး ရေရှည်ဆန့်ကျင်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အပြုသဘောနဲ့ အနုတ်လက္ခဏာတွေ ချိန်ခွင်လျှာ ရှိတယ်...